gtalk custom message error — MYSTERY ZILLION
gtalk custom message error
gtalk custom message ကိုရေးလိုက်ရင် ခဏနေရင် သူဘာသာ Available ဖြစ်သွားတယ်။
ပုံတင်ရင်လဲ ခဏနေရင် သူဘာသာ ပြန်ပြောင်းသွားတယ်ဘာပုံမှမပေါ်တော့ဘူး ဖြစ်နေတယ်။။
connection ကြောင့် ဖြစ်တာပါ။ ပုံတင်တဲ့ အခါမှာ upload မရသလို custom message ကို သွား update လုပ်တာ effect မဖြစ်လို့ ဒီလို ဖြစ်တာပါ။ connection ကောင်းတဲ့ နေရာမှာ ပြန် စမ်းကြည့်ပါ။
ဟုတ်ကို. မရဘူးဗျ လိုင်းကတရုတ်လိုင်းဆိုတော့ကောင်းတယ်အစ်ကို။ တခြားအကောင့်နဲ့သုံးတော့ဆင်ပြေတယ်ဘာမှကိုမဖြစ်တာကိုရ... အစ်ကိုအဲဒါအကောင့်ကြောင့်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်............... အစ်ကိုရေ ကယ်ပါအုံး စာလဲတင်ချင်သေးတယ်လေ.. :P
ကျွန်တော်ကတော့ ရတယ်. ညနေကတင် ပြောင်းလိုက်သေးတယ်။
ကိုစေတန် ရေ မရဘူးဖြစ်နေတယ်................... ကယ်ပါအုံး.................တချို့ပြောတော့ အကောင့်ကိုဟက်ခံထားရတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားနော်..... ကျနော်လဲ ညစ်နေတာအဲဒါကြောင့် :-(